Fiidiyow - Geofumadas
Fiidiyeyaasha si ay u bartaan sida loo isticmaalo AutoCAD, ArcGIS iyo barnaamijyada kale ee mijaheynaya.
Saaxiibka Naqshadayaasha, dhammaystir weyn u ah 3D madani ah
Tani waa mid ka mid ah xalka dhowr ah ee ay bixiso Eagle Point, isla shirkaddaas oo horaantii sagaashameeyadii nagu qancisay wax kasta oo aysan AutoCAD sameynin. In yar ka dib, taas oo ay doonayeen inay naftooda u huraan inay wax walba qabtaan, shirkaddu waxay ku laabanaysaa ujeeddadeedii ugu horreysay, ka dib markaa AutoDesk horeyba ...
Sawirro cajiib ah iyo muuqaalo dhulgariir iyo tsunami oo ka dhacay Japan
Waa intaas uun, waa wax laga naxo. Intii aan galbeedka Yurub ka kici jirnay oo Ameerika aan ku jiifnay hurdadii ugu fiicneyd, dhulgariir ku dhow 9 miisaanka Richter ayaa ruxay Japan markii ay ahayd 3 galabnimo halkaas. Daawashada fiidiyowyada sida biyuhu u galaan una qaadaan guryaha, gawaarida iyo doonyaha waa mid gaar ah. Waxa uu ahaa…
Fur Qalabka CAD, qalabka tafatirka gvSIG
Taxaneyaal astaamo aad u xiiso badan ayaa la bilaabay, oo ka yimid tabarucaadda CartoLab iyo Jaamacadda La Coruña. gvSIG EIEL waxay tusineysaa fiditaano kaladuwan, runti faa iido badan leh, labadaba maareynta isticmaale ee kajira gvSIG interface, foomamka gaarka ah iyo xaqiijinta otomaatiga ah. Laakiin waxa indhahayga soo jiitay inta badan waa Furan ...
AutoCAD-AutoDesk, GvSIG, tabo cusub, Video
Taasi waxay dib u soo celineysaa AutoCAD ws XUM
Nooca 1.2 ee AutoCAD 2011 WS ayaa la sii daayay, codsigaas bilaashka ah ee AutoDesk oo kuu oggolaanaya inaad ka shaqeysid khadka tooska ah iyo aaladaha mobilada. Waa horumar la taaban karo, in kasta oo nooca mobiladu ka dambeeyo wax kasta oo nooca internetka ahi sameeyo. Waxyaabaha kor loogu qaaday waxaa ka mid ah: Taageerada ...
Apple - Mac, AutoCAD-AutoDesk, tabo cusub, Video
AutoCAD keligeed ma keento howlo badan oo loogu talagalay maareynta iskudhafka ama abuurista miisaska dhibcaha. Madaniga 3D ayaa sameeya, laakiin nooca aasaasiga ah ma sameeyo, waana sababtaas markii aan la shaqeyneyno iskudhafyada ay soo saaraan wadarta saldhigga, GPS ama saamiga, waa inaan u baahanahay macros ku faafay halkaas ...
Waa qalab qiimo leh oo loogu talagalay mashaariicda ku wajahan waaxda biyaha iyo fayadhowrka ee ku hoos jira hay'adaha iskaashiga. Habka guud, Epanet wuxuu la shaqeynayay natiijooyin wanaagsan, in kastoo xaddidaad ku leedahay hanaanka la qabsiga ee isbeddelada. Kadib markaan raadiyay sababaha gvSIG iyo iskaashiga u noqdeen kuwa aan laga arki karin ...
Koorso bilaash ah oo bilaash ah
Barashada AutoCAD mar dambe cudurdaar uma noqoneyso waqtiyadan isku xirnaanta. Hadda waa suurtagal in la helo buugaag ay ku jiraan fiidiyowyo gebi ahaanba bilaash ah khadka tooska ah. Doorashadan aan ku tusayo ayaa laga yaabaa inay tahay tan ugu wanaagsan ee koorsada lagu baran karo AutoCAD si fudud. Tani waa shaqada Luis Manuel González Nava, oo ah nooc ka jiray ...
Waxaad joogtay ...
Gabadhu way garaacday, way u soo jeedsatay, way dul martay, way foorarsatay, waxayna ku aragtay isaga 34 sintimitir. Markaasuu gartay inay iyadu tahay, isla indhahaas… Waxay ahayd habeen caadi ah, oo si khasab ah looga shaqeeyo xafiiska. Maalmahaas markii muusigga socdaalka ee U2 uu ka dhawaajiyay kumbuyuutarka 'Chamaco', oo keenay ...
Leisure / waxyi, Video
Tools Beta Available 2.0 PlexEarth
Maalin ka hor waxaan ka hadlayey wararka nooca 2.0 ee qalabka 'PlexEarth Tools for AutoCAD' keeni doono, mid ka mid ah horumarada ugu wax ku oolka badan ee aan ku arkay Google Earth oo uu xubin ka yahay AutoDesk Developer Network (ADN). Maanta nooca Beta waa la soo saaray, kaas oo la soo dejin karo, la tijaabin karo iyo waxa muhiimka ah ...
AutoDesk 3D Dwg Google Earth PlexEarth
Egeomates: saadaasha 2010: Internet
Dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan yeesho kubad sixir ah oo aan awoodo inaan ka dhigo santero, laakiin taasi maahan sheegashadeyda, waxaan kaliya isku dayayaa inaan xoogaa ku qarash garoobo gurigan oo ah daweyn iyo koobkan kafee ah maadaama sodohday oo keliya ay cabaadayso oo usha leedahay, ka dib maraq cunto ah. Cadeyn, kuwa kaliya aqriya ...
blog Google Earth egeomates My WordPress
Internet iyo Blogs, egeomates My, Video
Ka dhigista fiidiyowga Google Earth
Waxaan helayaa su'aal, taas oo qof uu doonayo inuu fiidiyoow u soo raro Google Earth, waan fahamsanahay inay raadineyso tilmaamidda jidadka iyo ku darista fiidiyow iyaga. Aynu aragno wax la qaban karo oo ay asxaabteena reer Mexico codsan karaan, waxay u egtahay sida dhajinta sawir. Cudarada fiidiyowga YouTube-ka loo maleynayo inaan rabo ...
Google Earth KML egeomates My
Taasi waxay soo celineysaa AutoCAD 2010
AutoCAD 2010, Wow! Kani waa magaca ay Heidi u bixisay dib-u-eegiddeeda nuqulkan 'AutoCAD', sanad uun ka dib markay nooga warantay wax ku saabsan AutoCAD 2009. Imaatinka habar yar oo aragtay cibaaro sannad kasta muddo 17 sano ah, waxaa habboon in la fiiriyo. Dhowr ka mid ah waa wixii aan u maleynay ...
AutoCAD-AutoDesk, tabo cusub, Video
Ma jiraa baloog kasta oo ku yaal meelaha bannaan in ka badan 500 oo gelitaan?
Qoraalka Windows Live waa mid ka mid ah ikhtiraacyada ugu wanaagsan ee Microsoft ay si fiican u qabatay. Nooca cusub ee 14.0 wuxuu hadda diyaar u yahay inuu soo dejiyo, waxaa ku jira horumarin la taaban karo sida: Raadinta hawsha, markii la furayo boodhadh hore Falanqaynta hore ee hoose Abuur muuqaalka muuqaalka Sawirro ka soo gal ...
Sida loo isticmaalo sawirada taariikheed ee Google Earth
Sidaan kuu sheegay usbuucii la soo dhaafay, maanta ayaa la sii deyn doonaa nooca cusub ee Google Earth 5.0, inkasta oo aan cabno qaar ka mid ah waxa ay keeni karto, haddana waxaa aad ii cajabiyay shaqeynta si aan u arko kaydka taariikhiga ah ee sawirrada Google ay soo dejisay 2002 illaa taariikhda. A ...
Google Earth / Maps, tabo cusub, Video
Halkaas ayey ku taal Flickr, dhacdo ahaan waa inaan cusbooneysiinaa wixii aan ka baranay juqraafiga ee fasalka lixaad ee la xiriira Bariga Yurub, laakiin waa wax xiiso leh; Waa khariidad laga arkay aragtida danaha hareeraha saliidda (ugu yaraan waxaa jira xoog badan oo la saarayo taas) ... iyadoo ay ku xiran tahay aragtida naqshadeeyaha garaafka ...
Cartografia, Leisure / waxyi, Video